Iapile yongeza ukukhangela umfanekiso ukuze ibonakale kwi-ios 15
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo U-Apple wongeza ukuKhangela kweMifanekiso kwindawo ebonakalayo kwi-iOS 15
U-Apple wongeza ukuKhangela kweMifanekiso kwindawo ebonakalayo kwi-iOS 15
I-Apple ibhengeze uphuculo olungenaxabiso kuyoUkujongaumsebenzi wokukhangela, inqaku eliyintsusa elenzelwe ukukhangela inkqubo ngaphakathi kuzo zombini izixhobo ze-iOS okanye ze-iPadOS kunye neeMacBooks. (Kwimeko apho ubungaqinisekanga, Ukuqaqamba yindawo yokukhangela evulayo xa uswayipha ezantsi nakwesiphi na isikrini sasekhaya kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad.)
Kumsitho weWWDC osasazekileyo ngoJuni 7, uApple wabhengeza ukuba ukuGqibela kuya kubanakho ukwenza uphando lwefoto smart, ukusebenzisa itekhnoloji yobukrelekrele bokulinganisa ukuskena imixholo yegalari yomfanekiso wakho, kwaye ufumane nasiphi na isithombe osifunayo kwimizuzwana.
Iintsuku zokuhamba ngokungapheliyo kwikhamera yakho iphelile
Ngee-smartphones ezifikelela kumandla amakhulu okugcina kwezi ntsuku, ngeendlela ezininzi ezinikezelwa kwi-512GB- kunye Iifoto ze-iCloud ngokunikezela ngokugcina okungenamda kokugcina iifoto-uninzi lwethu luneenkumbulo zeminyaka eziqulathwe zezi zixhobo zincinci sizibiza ngokuba zii-iPhones.
Ngexesha elithile, kuya kuphantse kube nzima ukufumana ifoto esiyifunayo ngokwethu, ngaphandle kokukrola okuninzi kunye nokuchitha ixesha. Ngokuqinisekileyo oku kuyakhathaza ngamanye amaxesha, njengoko kunokuziva ngathi kukhangelwa inaliti kwisitya sefula.Ukujonga umfanekisondiyathemba ukutshintsha loo nto, kube kanye.
Ukukhangelwa kwemifanekiso ekujongwa kuyo kujonga ukuKhangela okuBonakalayo
Inqaku elitsha elimangalisayo liya kusebenza ngokubambisana neApple & apos;Jonga ngokuBonakalayoukukwazi, okwabhengezwa ngoJuni 7. Ukubonakala okubonakalayo kubonakala ngathi kwenza umsebenzi ofanayo neGoogle Lens kwi-Android-eya kuba nakho ukubona nokujonga izinto ngaphakathi komfanekiso okanye ifoto- kodwa ukwahluka kweApple kubonakala ngathi kukwi Amanqanaba ayo okuqala ophuhliso, kwaye hayi njengobhetyebhetye njengogxa wakhe okwangoku. Ndiyabulela kule teknoloji i-AI inikwe amandla yi-Apple, ngoku uya kuba nakho ukukhangela ifoto kwilayibrari yakho ngokusebenzisa nje amagama aphambili kwizinto ozikhumbulayo zifakiwe emfanekisweni, okanye abantu ababenawe, okanye nakwindawo yemeko isiganeko.
Ngaphandle kokumangalisa, uya kuba nakho ukujonga umfanekiso ogciniweyo usebenzisa indawo leyo yathathwa kuyo.Qaphela: Ukuba awoneliseki kwaye awonelisekanga ngohlobo lwenqwelomoya yeVenkile yokuKhangela, ungahlala uhlala khuphela iilensi zikaGoogle kwisixhobo sakho se-iOS ngqo kwiVenkile yeApple. Awuyi kuphumelela & apos; ngekwazi ukuyisebenzisa ekukhangekeni komfanekiso ngokuKhangela, nangona kunjalo.
... kunye neNqaku eliBukhoma
Itekisi ebukhoma lolunye udibaniso lwesoftware ye-iOS 15 eboniswe apha, kwaye yona i-gamechanger xa isiza entshaUkujonga umfanekiso.Yiyo le evumela iApple, isebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela, ukuqaphela isicatshulwa naphina ngaphambili okanye ngasemva kwifoto.
Njengophawu lwayo olwahlukileyo,Itekisi ebukhomalulongezo olukhethekileyo kwi-Apple & apos; s Ikhamera kunye neeFoto app (ekuvumela ukuba ukhethe kwaye ukope, uncamathisele, ujonge phezulu, okanye uguqulele isicatshulwa ngqo kumfanekiso). Kodwa njengenxalenye yeUkujonga umfanekiso, yazisa amandla okufumana ifoto ngokujonga nje igama elikwifoto okanye umfanekiso-skrini ekuthethwa ngawo.
Ndiyazi ukuba ndihlala ndithatha iifoto zesikrini okanye iifoto ezikhawulezayo zokupheka, amanqaku abhalwe ngesandla, okanye iinombolo zefowuni endifuna ukuzigcina kwaye ndiziphonononge ngelinye ixesha-ukuphulukana nazo ngokukhawuleza kwisiphithiphithi segalari yam yemifanekiso eyandayo.Ngokukhangelwa kweMifanekiso ngokuKhanyayoukuxhasa ukukhangela okubhaliweyo okuBukhoma, uya kuba nakho ukufumana iifoto zakho usebenzisa naliphi na ibinzana elifunyenwe ngaphakathi kokubhaliweyo okufotiweyo.
Umzekelo, ukuba uyazi ukuba uthabathe i-pic yale recipe yemaqebengwana yaseJamani ongayikhumbuliyo igama, kodwa wazi kuphela ukuba lisebenzise amaqanda amane, unokukhangela 'amaqanda ama-4,' kwaye ukuKhanya kuya kufumana kwangoko ifoto yeresiphi (ukuba nje idwelisa 'amaqanda ama-4'). Kukhulu kangakanani oko?
Ezinye izinto eziNgcaciso eNtsha: ukuFumanisa kwaNxibelelwano kwangoko
Ngaphandle kokujonga ngokulula iifoto,Ukujongakwi-iOS 15 iya kuba nakho ukukhupha abafowunelwa kuwe ngebha yokukhangela.
Xa uchwetheza igama lomhlobo & apos; kwiUkujonga, uya kuboniswa kwangoko ukhetho lomqolo ekuvumela ukubaumyalezo, umnxeba, umnxeba wevidiyo, i-imeyile, okanyehlawulaloo mntu. Apha ngezantsi, ifayile ye- IiMaphu zeApple iwijethi ibonakala ukubonisa indawo yangoku yomhlobo wakho-ukuba nje sele babelane nawe nge-Fumana eyam, ewe.
Ngaphantsi kwalonto, ukuJongwa ngokuKhanyayo kuhlanganisa kwaye kubonise iindidi zayo nayiphi na into onokuthi utshintshisane ngayo naloo mntu ngaphambili. Oku kubandakanyaizixhumanisi ezabelwana ngazo, imiyalezo, iifoto, imicimbi yekhalenda efanayo,kwayei-imeyile.
Jonga Abadlali, Iimvumi, iMiboniso yeTV, iiMuvi kwiiMboniselo
Ngokucacileyo iApple ikwafumana namaxesha nge-iOS 15, kwaye inokukugcwalisa kwizinto ezininzi zenkcubeko ngokukhangela ngokukhawuleza okuchwetheziweyo-uqikelele-Ukujonga.
Njengolongezo lokugqibela oluzayo kwiUkujongaI-Apple idibanise ukukwazi ukujonga phezulu kunye nokukhangela iiprofayili ezenzelwe abadlali kunye neemvumi, kunye nemiboniso bhanyabhanya kunye neemovie.
Njengoko ubona kwisithombe esingezantsi, iziphumo zitsala ngokufutshane kwaye zichaze ii-bios kubandakanya ulwazi olubalulekileyo olufana nokuzalwa kunye nemihla yokufa (yabantu abadumileyo), kunye nomhlathi omfutshane 'Malunga' onokwandiswa ukuze ujonge inkcazo ebanzi.
Eyona Dili ilungileyo ye-iPhone 11 ngoku
I-Apple iPhone 11
Tshintshela kwiVerizon kwaye urhwebe ngesixhobo esifanelekileyo.
$ 700 icinyiwe (100%) Thengisa phakathi$ 0 $ 69999 Thenga kwi-T-Mobile
Xa uyihlawula ngaphezulu kweenyanga ezingama-30 nge-10 $ / ngenyanga
$ 300 icinyiwe (50%)$ 300 yeedola 59999 Thenga kwi-AT & T
I-Apple iPhone 11 Pro
SIMAHLA xa utshintsha kwaye urhweba ngomnxeba ofanelekileyo, ufuna isicwangciso seMagenta Max
$ 900 (100%) Thengisa phakathi$ 0 $ 89999 Thenga kwi-T-Mobile
Ufumana i-300 yeKhadi leZipho SIMAHLA ngokuthenga
$ 89999 Thenga kwiithagethi
I-Apple iPhone 11 Pro Max
$ 99999 Thenga kwiithagethi
Eyona midlalo ilungileyo yeApple Watch
I-Spotify ibuyisa imicimbi yayo yokubulala yexesha lokuqala kunye nokubuyisa ababhalisile
Urugged: Ezona meko zintle ze-iPhone 6 Plus
IMotorola iqala ukukhupha i-Android 7.1.1 Nougat yeMoto X Dlala
IMetroPCS iya kuthengisa ii-iPhones ngokusemthethweni, kubandakanya i-iPhone SE nge-50 yeedola
I-Samsung kunye neapos ye-Galaxy Watch 3 kunye ne-Watch 2 esebenzayo bafumana umjikelo omtsha oshushu wezaphulelo ezinkulu